Madaxweynaha Puntland oo warbixin ka dhegaystay Guddiga ku-meel-gaarka ah ee Doorashooyinka – Kalfadhi
Madaxweynaha Puntland oo warbixin ka dhegaystay Guddiga ku-meel-gaarka ah ee Doorashooyinka
August 25, 2020 Hassan Istiila
Madaxweynaha Dowlad-gobolleedka Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa xalay kulan la qaatay Guddiga ku-meel-gaarka ah ee Doorashooyinka maamulka Puntland.
Madaxweynaha oo warbixin ka dhegaystay Guddiga ayaa bogaadiyey shaqada guddiga u qabsoomtay, waxaana uu ku dhiirigeliyay in ay halkaasi kasii wadaan.
Madaxweyne Deni waxaa ka go’an hirgelinta nidaamka xisbiyada badan oo hadda meel wanaagsan maraya, Xukuumaduna waa garab taagantahay Guddiga, iyadoo la illaalinayo madax banaanidooda, ayaa lagu yiri war kasoo baxay madaxtooyada Puntland.
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo habeen ka hor kulan la qaatay Ururada Bulshada, Madaxda Ururada Siyaasadda, Aqoonyahanada iyo Waxgaradka Puntland ayaa uga warbixiyey xaaladda guud ee Puntland, shaqooyinka dowliga ah ee laqabtay sida tayeynta Ciidamada, horumarinta hanaanka maaliyadda iyo hirgelinta Nidaamka Xisbiyada badan oo meel wanaagsan maraya .
Juxa “Madaxweynuhu wuxuu ku doodayaa xaggeey Dastuurka kaga taalaa in 30 beri lagu magacaabo Raysal Wasaaraha”
Maxaa looga hadlay kulankii khaaska ahaa ee dhex-maray Taliyaha NISA Fahad Yaasiin iyo Madaxweynihii hore Xasan Sheekh?